Madaxweynaha Soomaaliland, ma waxa uu ogolaaday wadahalka Soomaaliya mise inuu la shaqeeyo Dowladda Soomaaliya? – Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliland, ma waxa uu ogolaaday wadahalka Soomaaliya mise inuu la shaqeeyo Dowladda Soomaaliya?
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay gaaray magaalada Adis-Ababa ee Xarunta dalka Itoobiya ayaa halkaasi kulamo kula qaatay Guddoomiyaha Xisbiga Talada haaya ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ahna Wasiirka Maaliyadda ee Itoobiya Axmed Shide iyo Reysal Wasaaraha dalkaas Dr Abiy Ahmed.
kulamada oo gaar gaar ahaa ayaa looga hadlay Xaaladda Soomaaliland iyo Itoobiya kadibna waxaa loo dhaa-dhacay wadahalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Reysal Wasaaraha Itoobiya ayaa ka dalbaday Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu ogolaado in Itoobiya ay wadahal siiso Maamulada Muqdisho iyo Hargeysa taas oo markii dambe la isku fahmay.
Reysal Wasaaraha Itoobiya ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray “Waxaan maanta kulan la qaatay Madaxweynaha Maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana isku afgaranay in la bilaabo wadahalka Soomaaliya iyo Soomaaliland si loo sii wado isdhaxgalka gobolka”.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa soo dhoweysay go’aanka uu qaatay Madaxweynaha Soomaaliland ee ah dib u bilaabidda wadahalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo muddo dheer hakad ku jiray. Qoraal laga soo saaray Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyay waxa ayna ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan mira-dhalka Wadahalkaasi.
“DFS waxay bogaadineysaa sida Madaxweynaha Maamulka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi uu u aqbalay in Maamulkiisa & Dowladda Federaalka ay wada shaqeyn dhaw yeeshaan” ayaa lagu yiri Qoraal kooban oo ka soo baxay Villa Soomaaliya.
“Dowladdu waxay u aragtaa in tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday, waxaana diyaar u nahay in aan ka miro dhalino wada shaqeyntaas”, ayaa sidoo kale lau yiri qoraalka ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale u mahadcelisay Madaxda Itoobiya. Sidoo kalane waxay soo dhoweysay doorka Dowladda Itoobiya ee dhex-dhaxaadinta Labada dhinaca ee Soomaaliya iyo Soomaaliland.
“Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dhiirrigelinaysaa dadaalka uu wado R/Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed muujiyay sida ay uga go’antahay dardargelinta isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika” ayaa lagu yiri qoraalka kooban oo lagu daabacay barta Twitter-ka Madaxtooyada Soomaaliya.
Wararka madaxda banaan ee laga helay Itoobiya ayaa sheegaya in waxa lagu heshiiyay ay yihiin oo kaliya wadahal labada dhinac ah oo ay qaban doonto dowladda Itoobiya. Lama oga waqtiga la qaban doono balse waxaa la filayaa in uu dhowaan qabsoomo kulanka labada dhinac oo ay Itoobiya soo qaban qaabisay.
Hawlaha ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee federaalku ay ka fuliyaan Puntland oo la hakiyay
Xildhibaan Canab Xasan “Waqti wanaagsan ayaa la soo qaatay dadkii isoo doortay”
Xildhibaan Canab Xasan "Waqti wanaagsan ayaa la soo qaatay dadkii isoo doortay"